Posted by တန်ခူး at 10:14 PM
မွန်ဆိုတဲ့တစ်ယောက်နဲ့ နာမည်ရော..အဖြစ်ပျက်ရော တည့်တည့်ကြီးမှန်သွားပါရောလား ဟားဟား
… ဟိုးငယ်ငယ်က နှလုံးသားတွေက လတ်ဆတ်တယ်… ဖြူစင်တယ်… ပြီးတော့ နေရာလပ်တွေများတယ်… အရောင်မရှိဘူး… ဒါကြောင့်အချစ်တွေက ပြည့်နေအောင် ထည့်လို့ ရတယ်…လိုသလိုစိတ်ကူးယဉ်လို့ ရတယ်… လိုသလိုဆေးရောင်ခြယ်လို့ ရတယ်… ချစ်တယ်ဆိုတာ မုန်းတာထက်ကောင်းတော့ ငယ်တုန်းက ချစ်ရတာကို ပျော်ခဲ့တာ… အဲဒါဟာ ဘ၀ကို မမြင်ဖူးသေးတဲ့ လူငယ်တယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့နှလုံးသားပေ့ါဟာ… အဲဒီလိုတွေးခဲ့ အဲဒီလိုရေးခဲ့တာကို ငါနောင်တမရပါဘူး
အဲဒီစာသားလေးတွေကိုအရမ်းကြိုက်တာပဲး) ငယ်ဘ၀အိပ်မက်တွေက ပြန်လည်မရနိုင်တော့ဘူးနော်အမ
Love comes and goes. Kindness will remains. ( ASSK)
အစ်မတန်ခူးရေ... ဆရာကန်တော့ပွဲ အမှတ်တရ၀တ္ထုတိုလေးကို သဘောကျနှစ်သက်စွာနဲ့ ဖတ်သွားကြောင်းပါ။ ၀တ္ထုတိုအသစ်များကိုလည်း ဖတ်ရဖို့ စောင့်မျှော်လျက်ရှိပါတယ်။း)